सहकारी व्यवसायको नमूना - सहकारीखबर
सहकारी व्यवसायको नमूना
Share : 836
सहकारीका बारेमा बोलेर, भाषण गरेर होइन गहिरो चिन्तन–मनन गरेर उपयुक्त विचार र विधि–प्रक्रिया तय गरेर जनतालाई सेवा पु-याउन सकिन्छ । सहकारीमा सामेल हुने सदस्यहरू सकेसम्म पूर्णरूपले समर्पित भएर नै सहकारीको कामबाट आफ्ना सामाजिक–आर्थिक–साँस्कृतिक आवश्यकता पुरा गर्न सक्नेछन् । पैसा हुने, सम्पत्ति हुने र समाजप्रति योगदान गर्न चाहने मानिसले सहकारीमा लगानी गरेर हजारौ परिवारलाई उठाउने अभियानमा लाग्ने हो । हाम्रो देशमा पैसा हुनेहरूले धेरै पैसा आफू एक्लै कमाउने काममा सहकारीको दुरूपयोग गरेको भन्ने हो कि ? सहकारीमा सदस्य बन्ने परिवार चै चर्को व्याजमा ऋण खाने र पैसावालाहरूका लागि असल ग्राहक बनिदिने मात्र जस्तो हो कि ? आदि प्रश्नहरूले छटपटी सबैलाई गराएकै छ । सहकारीको मर्म, सिद्धान्त, भावना, ऐन अनुसार विद्यमान हाम्रो अभ्यास नभएको कुरामा ध्यान दिन पर्ने अवस्था छ । पत्रकार, नागरिक समाज, स्वयं सहकारीमा लामो समयसम्म लागे मानिसहरू हाम्रो सहकारी अभ्यासप्रति सन्तुष्ट छैनन् । राजनीतिक क्षेत्र केवल सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र बोल्ने गर्दछ । सहकारी क्षेत्रका केही समूह खास गरी सहकारी क्षेत्रका नेता हौ भन्नेहरूको समूह बाहेक आम रूपमा सहकारीप्रति आलोचनात्मक विचार पाइने गरेको छ । विकसित देशमा सहकारी नै हुदैनन भन्ने अल्प ज्ञान भएका मानिसले सहकारीको नीति नियम बनाउने र निर्णय लिने हाम्रो देशमा उल्टो गङगा बग्नु अस्वभाविक भने होइन । तर, सहकारी भनेको नागरिकको क्षेत्र हो, त्यसैले विश्वमा असल अभ्यासको व्यवापकता भएको सहकारीको ज्ञानबाट नेपालमात्र अपवाद बन्न सक्दैन । युरोपको उपभोक्ता सहकारीको बारेमा जानकारीका लागि यो सामग्री यहा राखिएएको छ ।
जिम्मेवारी र दिगो उद्यमशीलताको नमुना युरोकोप
उपभोक्ता सहकारीहरूले उच्च स्तरका सेवा प्रदान गर्न आधुनिक प्रविधिहरूको उपभोग गरेका छन् । युरोपेली उपभोक्ता सहकारी संघ “युरोकोप”का सबै सदस्यहरूका बिक्रि केन्द्रहरू ३०,००० भन्दा बढि रहेका छन् । यी विक्रि केन्द्रहरू स्थानीय पसलदेखि लिएर निश्चित समुदायको लागि दुर्गम स्थानमा स्थापना गरिएका विक्रि केन्द्रसम्म र शहरी क्षेत्रका सपिङ कम्प्लेक्समा रहेका सुपरमार्केट तथा हाइपर मार्केटसम्म रहेका छन् । रिटेल बिक्रिको बजारमा उपभोक्ता सहकारीहरू प्रमुख रहने गरेका छन् । युरोकोपका सबै सदस्यहरूको वार्षिक कारोवार ७० विलियन युरोभन्दा बढि रहेको छ ।
मुल्य मान्यताको पर्वाह नगरी प्रगती गरिएको, उपभोक्ता सहकारीहरूले उच्च स्तरमा बलियोसंग सामाजिक जिम्मेवारीका कुरामा केन्द्रीत हुने गर्दछन् । त्यसकारण, सदस्यहरूको सन्तुष्टी, चाहना र आवश्यकतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर उपभोक्ता सहकारीहरूले दिगो हुने गरी काम गर्दछन् । उत्पादन तथा वितरणका प्रक्रियामा समुदायको दिगो विकासका कुरालाई ध्यानमा राखेर विभिन्न क्रियाकलाप गर्ने गरिन्छ । स्थानीय समुदायको दिगो विकास, वातावरणीय सरोकारका विषयमा ध्यान दिइने, उपभोक्ताको स्वास्थ्य तथा सुरक्षामा ध्यान दिएर उपभोक्ता सहकारीले आफ्ना सबै क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउने गरेका छन् । युरोकोपका सबै सदस्य संघ संस्थामा ३,००,०००९तीन लाख० मानिसले रोजगारी पाएका छन् । उपभोक्ता सहकारीमा रोजगारी प्राप्त गरेका प्रत्येकको व्यक्तित्व विकासमा बिेशेष जोड दिइन्छ ।
युरोकोपले उपभोक्ता सहकारीको मुल्य, मान्यता र संरचनाको विषयमा राम्रो नमुना प्रस्तुत गर्दछ साथै युरोपेली स्टयाण्डर्डमा उपभोक्ता सहकारीको मोडेल प्रस्तुत गर्दछ । युरोकोपका गतिविधिहरूका उपलब्धीको विषयमा खास गरीकन यस्का सहभागीहरूले युरोपेली युनियनमा फोरमहरूमा, युनियन र यस्का साझेदारी कार्यक्रमहरूमा र अन्य सरोकारवालाहरूमा चर्चा हुने गर्दछ । स्रोत : युरोकोपन्युज